Shacabka Hiiraan oo la dagaalamaya maleeshiyada Alshabaab | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Shacabka Hiiraan oo la dagaalamaya maleeshiyada Alshabaab
Shacabka Hiiraan oo la dagaalamaya maleeshiyada Alshabaab
Hiiraan(SNTV)- Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanada Gobalka Hiiraan ee Bartamaha Soomaaliya ayaa wada iska caabin ay kaga hortagayaan maleeshiyaadka Argagixisada ah ee Al-Shabaab, kuwaasi oo caadaystay inay dhacaan hantida dadka.
Ololaha dadku ay isaga caabinayaa dhibaatooyinka ALshabaab ayaa muddooyinkan soo ifbaxay,iyadoo sidoo kale Gobolka SHabeelada Dhexe ay ka socdaan abaabulo ka dhan ah Alshabaab oo ay wadaan dadka deegaanka oo is abaabulay.
Gobolka Hiiraan ayaa kamid ah meelaha Shabaabku ay dadka ku dhibaataynayaan.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo ku dhaqan Gobolka Hiiraan ee u istaagay inay iska dhiciyaan Argagixisada Al-Shabaab ayaa wuxuu sheegay markii ay u dulqaadan waayeen dhibaataynta iyo dhaca maleeshiyadaan ay ku hayso inay hubka qaateen.
Dhanka kale militariga Soomaaliya ayaa gacan siinaya shacabka go’aansaday in ay la dagaalamaaan Alshabaab,taasi oo keeni kartaa in ay wada shaqeyn dhexmartay ciidamada iyo shacabka oo fahmay dhibaatada ALshabaab,islamarkaana keeni karta in Alshabaab looga adkaado gulufka dagaal.
Previous articleSoomaaliya iyo UNHCR oo ka wada hadlay arrimaha Soomaalida ku go’doonsan Liibiya
Next articleSaraakiil Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Gobolka Gedo.